ကုမ္ပဏီ၏လျှပ်စစ်ပါဝါနင်း/ခြေဖဝါးခလုတ်သည် ဘေးကင်းမှု၊ ကြံ့ခိုင်မှုနှင့် လည်ပတ်ရလွယ်ကူမှု၊ နှင့် ဘက်စုံသုံးနိုင်မှုတို့ဖြင့် ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားသည်။ နူးညံ့သိမ်မွေ့သောဒီဇိုင်းများပြီးနောက်၊ ၎င်း၏ကိုယ်ရံတော်အဖုံးနှင့် ခြေနင်းများကို မြင့်မားသောခိုင်ခံ့သော အလူမီနီယမ်သတ္တုစပ်များဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး၊ ပလပ်စတစ်များကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ထားသော မီးတောက်များကို တားဆီးထားသည်။ ၎င်းသည် ထိခိုက်မှု၊ တုန်ခါမှု၊ ဝတ်ဆင်မှု၊ ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ ချေးနှင့် မီးတောက်တို့ကို သိသိသာသာ ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ရိုးရာလှည့်ပတ်သည့် axle drive ကို plunger drive သို့ မြှင့်တင်ထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
စျေးပေါသောလျှပ်စစ်စွမ်းအင် Foot Pedal Switch အခမဲ့နမူနာကိုပေးသည်။
၎င်း၏သက်တမ်းသည် တာရှည်ခံပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရမှု မြင့်မားသည်။ ၎င်းကို 1a+1b ၏ အဆက်အသွယ်ပုံစံဖြင့် အတွင်းပိုင်းတွင် မိုက်ခရိုခလုတ်ဖြင့် တပ်ဆင်ထားသည်။ micro switch ကို 2a+2b ၏ contact form သို့ အဆင်ပြေစွာ တိုးမြှင့်နိုင်သည်။ တည်ငြိမ်သော အဆက်အသွယ် ခုခံမှု သည် ထိန်းချုပ်ထားသော ယုတ္တိတန်သော လက်ရှိ အချက်ပြမှုများအောက်တွင် အလွန်ကောင်းမွန်သော စွမ်းဆောင်ရည်ကို အာမခံပါသည်။ ဘေးကင်းသောအသုံးပြုမှုကို သေချာစေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ထုတ်ကုန်မျက်နှာပြင်ကို ဖမ်းစားနိုင်သောသတိပေးတံဆိပ်များပါရှိသည်။ လျှပ်စစ်ပါဝါ ခြေထောက်နင်းခလုတ်
ထုတ်ကုန်ကို နှိပ်စက်တွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုသည်။ Punching equipments, Benders, Spot Welders. အလိုအလျောက်စက်ကိရိယာအမျိုးမျိုး၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာတူရိယာများနှင့်အခြားနယ်ပယ်။
Electric Power Foot Pedal Switches အတွက် သတ်မှတ်ချက်များ
1.FS-2 FS-3 FS-4 FS-5 Pedal Switch
2. အရည်အသွေးမြင့် မိုက်ခရိုခလုတ်ဖြင့် ဂျပန်နိုင်ငံမှ ပြုလုပ်သော မိုက်ခရိုခလုတ်ကို ရွေးချယ်နိုင်သည်။
Electric Power Foot Pedal Switch အတွက် အင်္ဂါရပ်များ
1.Foot Switch၊Foot Switch
2. အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား: 125V/250V/380V
3. အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လက်ရှိ;10A/5A/3A
4. လုပ်ငန်းအပူချိန် - 25 ဒီဂရီ - + 45 ဒီဂရီ
5.စက်ပိုင်းဆိုင်ရာခံနိုင်ရည်- အကြိမ် 500,000
6. လျှပ်စစ်ခံနိုင်ရည်- အကြိမ် 100,000
hot Tags:: Electric Power Foot Pedal Switch၊ တရုတ်၊ စျေးပေါ၊ လျှော့စျေး၊ နောက်ဆုံးပေါ်ရောင်းချမှု၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ တင်သွင်းသူများ၊ စတော့ရှယ်ယာ၊ အခမဲ့နမူနာ၊ စျေးနှုန်း၊ ကိုးကားချက်၊ အာမခံ ၂ နှစ်